Dowladda Puntland oo dib ula wareegtay Afurur – Radio Daljir
Agoosto 18, 2018 4:19 g 0
Iyadoo dhawaan ciidamada PMF ee dawlada Puntland ay banayeen Saldhig ay kulahaayeen Buuralayda Calmadow ayaa halkaasi waxaa dib ula wareegay Xoogag ka tirsan Al-Shabaab.
Deegaanka Af-Urur Saldhig ku yaalay oo ciidamadu ay horay uga baxeen kadibna la wareegeen Al-Shabaab ayaa markale Ciidamada dawlada Puntland ay dib ula wareegeen iyagoo aysan jirin wax dagaal ah oo ka dhacay.
Saraakiil ka tirsan dawlada Puntland ayaa sheegay inay deegaankaasi iyo deegaano dhowr ah oo hoostaga ay ka wadaan Hawlgalo lagu Xaqiijinayo amniga isla markaana lagu baadi goobayo xoogagii baneeyey Saldhigga Af-Urur.
Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ciidamada Puntland markii ay soo galeen deegaankaasi ay Al-Shabaab uga baxeen aysana jirin wax dagaal ah oo ka dhacay.
Sarkiil ka tirsan dawlada Puntland ayaa sheegay horay in ciidamadu saldhigan ugu baneeyeen xeelado dagaal iyo Cabsi laga qabo Weerar Gaadmo ah kadibna ay u diyaar garoobeen dagaal awoodooda markii la arkayna ciidamadii Al-Shabaab siga baxeen sida ay xaqiijiyeen Askarta ka tirsan kuwa dawlada Puntland.